Account Types - FXPRIMUS
Dooro nooca akoonkaaga si loogu beego qaabkaaga ganacsi iyo xajmiga maalgashigaaga.
Dooro akoon tareedin/ganacsi oo FX ah kaas oo ku habboon baahiyahaaga ganacsi. Xirmooyinka akoonadeyna waxa loo habeeyey si ay ugu habboonadaan macaamiisha dhammaan noocyada darajooyinka iyo heerarka maalgashiga. Ka hubi xirmooyinkayaga hoos oo go’aanso midka kaa caawin doona si kor loogu qaado tareedinkaaga/ganacsigaaga. La tareedgarey/ganacso dilaaliinta anshaxa leh, oo ka faa’iidayso adeegyadeyna hogaaminaya-warshadaha iyo wax bixinta, maanta.
Dooro akoon tareedin/ganacsi oo FX ah kaas oo ku habboon baahiyahaaga ganacsi. Xirmooyinka akoonadeyna waxa loo habeeyey si ay ugu habboonadaan macaamiisha dhammaan noocyada darajooyinka iyo heerarka maalgashiga. Ka hubi xirmooyinkayaga hoos oo go’aanso midka kaa caawin doona si kor loogu qaado tareedinkaaga/ganacsigaaga.
Kordhi Laverage-ka ilaa
Ilaalinta Dheelitirka Xun
Ka madax banaan Swap
Lacaga Aasaaska : USD
Cel-celiska Spread-ka*: ~ 1.5 Pips
Kordhi Laverage-ka ilaa: 1 : 1000
Ilaalinta Dheelitirka Xun:
Ka madax banaan Swap:
Lacaga Aasaaska : USD, EUR, GBP, SGD & PLN
Cel-celiska Spread-ka*: Laga bilaabo 1.5 Pips
Cel-celiska Spread-ka*: Laga bilaabo 0.3 Pips
Komishanka*: Laga bilaabo $8
Lacaga Aasaaska : USD, EUR, GBP
Cel-celiska Spread-ka*: Laga bilaabo 0 Pips
Kordhi Laverage-ka ilaa: 1 : 500
*Noocyada Koontada Cusub waxay dhaqan galayaan 22-ka Noofambar 2021
* Digniinta VIP iyo SMS waa la baabi'in doonaa haddii aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah 30 maalmood ama ka badan
* Macaamiisha waxay lahaan karaan ilaa 5 akoon midkiiba
Fulin deg-deg hillaac
ah oo nooc kasta oo akoon ah leyahay
tareedin/ganacsi oo horumarsan oo kala duwan
shaqsiyeysan, luqado badan ku hadla 24/5
Xaalado ganacsi oo
ammaan ah oo aan laga adkaan
ammaan ah ilaa 5 milyan oo EUR ah